Soosaarida Mashiinka Shiinaha Gabion iyo Warshad | Jiake
Model No: LNML
Mashiinka miiro ee miilaadiyada, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka mesh hexagonal silsilada mesh mashiinka makiinada gabalka mashiinka makiinada gabalka, waa in la soo saaro mesh silsilada hexagonal ee xoojinta isticmaalka sanduuqa dhagaxa. Mashiinka xarkaha ee hexagonal waa mashiin qalooc ah oo gaar ah oo lagu been abuuro meshwork hexagonal.
Mashiinnada culus ee hexagonal waxaa loo isticmaalaa ilaalinta muuqaalka, dhismaha, beeraha, batroolka, warshadaha kiimikada, tuubbooyinka kuleyliyaha, badaha, buuraha, wadada, iyo buundada, iwm.
Dhexroor Wire: 1.6-3.5mm
Size mesh: 60-150mm
Fidida Mesh: 2300-4300mm
Xawaare: 165-255m / saac
Tirada qalloocinta: 3 ama 5
Mashiinka gabion otomaatiga ee taxanaha ah waxaa ku jira afar qaybood oo heer sare ah: Mashiinka shabaqa weyn, mashiinka wareega, aaladda siligga, iyo mashiinka xargaha wareega, waxay soo saari kartaa cabbirro cabbirro kaladuwan iyo cabbir mesh. Mashiinkayagu waxaa si gaar ah loogu isticmaalaa in lagu soo saaro cabbirka ballaaran iyo culeyska culus ee laba geesoodka ah (galvanized, galvanic & PVC wire) siligyo silig ah oo loogu talagalay xayndaabka iyo isticmaalka dhalooyinka dhagxaanta.
Moodel Cabbirka mesh(mm) Ballaca ugu sarreeya(mm) Dhexroor Wire(mm) Lambarka laba-laabashada Xawaaraha qoob-ka-wadista weyn Gawaarida(kw) Xawaare(m / saac)
3.Superiorities of silsiladda isku xirka silsiladda wax soo saarka xayndaabka
Mashiinka mesh Gabion, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka mesh mesh silig-culus oo culus, ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro mesh gabion iyo sanduuqa dhagaxa, oo si ballaaran loogu isticmaalo ilaalinta muuqaalka, dhismaha, beeraha, batroolka, warshadaha kiimikada, dhuumaha kululaynta, badda, buuraha, wadada, iyo buundada , iwm.
1.Mitsubishi PLC & taabashada taabashada, elektronikada Schneider, Invt inverter.
2. Gudaha iskutallaabta, waxaa ku yaal baseplate welded, oo dhumucdiisuna waa 12mm. xasilooni sare, xoojin xoog-ku-muun-adag (naqshad cusub).
3. Iskutallaab-ku-tallaalidda waxaa lagu soo saaray habeyn gaar ah oo leh saxnaan sare. Tayada ayaa la dammaanad qaadi karaa. Shirka mashiinka ayaa waliba lagu dhammeystiraa meel gaar ah. Waxqabadka guud waa la hagaajiyay.
4. Qalabkayagu wuxuu adeegsadaa laba ulaha wadista halkii uu ka isticmaali lahaa hal wade wadid, xawaare sare & orod deggan
5. Mashiinku wuxuu qaatay qalab gaar ah si saliidda saliidda looga soo celiyo.
6. Duurka naxaasta leh ee mashiinkeena ayaa leh waxqabadka baabi'inta, oo u fiican dhidibka.
7. Gunta culeyska mashiinku waa shey bir ah oo waara, waara.
8. Kameradda mashiinku waa bir bir badan leh, waara.
9. Sagxadda jiidista waxay kujirtaa xirmo, cimri dheer adeeg.
10. Marka fiilada ay jabto oo fiilada wareega ay duubto, mashiinku si otomaatig ah ayuu shaqada u joojin karaa.
4. Alaabada la soo saaray
Miizione Gabion waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo tuubbooyin bir ah oo mesh bir ah ama sanaadiiqda dhagaxa, kuwaas oo si weyn loogu isticmaalo ilaalinta iyo taageerida badaha, buuraha, wadada iyo buundada, kaydadka iyo injineer kale oo madani ah, sidoo kale waa sheyga ugu fiican daadadka.
Mesh Gabion (mesh silig Hexagonal) ayaa sidoo kale si ballaaran loo isticmaalaa dayrka, mesh shaandhaynta ee ilaalinta deegaanka iyo muuqaalka, dhismaha, beeraha, batroolka, warshadaha kiimikada, tuubooyinka kululaynta, iyo tubooyinka kale mesh silig.